Indlela yokwenza isangweji
I-BUTTERBROT - ihunyushwe kusuka eJalimane isho isinkwa nebhotela. Kodwa ukusetshenziswa okuvamile kuyisinkwa sezinkwa noshizi, isobho, imifino kanye nezinye izigcawu.
Ama-sandwich angaba: avulekele - ajwayelekile, avaliwe - amasangweji namancane amancane. Ungakwazi ukulungiselela nokuhlukahluka okubizwa ngokuthi ama-sandwich cake, ujabulele impumelelo engaphansi. Ukulungisa amaswidi uzodinga:
ummese omkhulu obukhali (wokusika isinkwa);
ummese omncane (ukusika ukugcwalisa);
Amapulangwe we-1 - 2;
ithreyi (noma ipuleti enkulu flat).
Ingxenye eyinhloko ye-sandwich isinkwa. Ayikho imikhawulo ekukhethweni kwezinhlobo zayo. Esikhathini sokuhamba ngesibindi, futhi "Borodino", ne-peckvanenny, kanye nezinkwa ezimhlophe nazo zonke izinhlobo zezinhlayiyana. Kungcono ukusebenzisa isinkwa sango-yesterday - izinhlanzi ezintsha ngokuqinile. Ngaphambi kwesikhathi, amahora angu-2 kuya kwangu-3 ngaphambi kokupheka, kuyadingeka ukuyikhipha esikhwameni se-cellophane, unike umoya ukubuyisela izindawo zayo zangempela.
Ngaphambi kokuba uqale ukusika isinkwa, cabanga ngesilungiselelo sokwabelana ngamaswidi, ngoba ukuma kwawo kungaba okuhlukile - okwesigxathu, isikwele, esinqunyiwe, i-crescent, i-oval. I-Fantasy iphakamisa inhlanganisela eminingi kakhulu, kodwa kaningi okulandelayo kuyasetshenziswa:
Ukusebenzisa ummese obukhali, susa zombili izikhwama, bese uthatha isinkwa (isinkwa) kuyo yonke ubude ube yizicucu ezimbili ezibekwe eceleni, kufana nokuqina. Lubricate kahle ngamafutha emgqeni we-longitudinal. Futhi ngemva kwalokhu, zihlukanise ngokuphathelene nesilinganiso esifanele sama sandwich. Ukuqala ukusika kuyadingeka kusukela phakathi - ngezinkampani ezilandelayo, ezincishisiwe ezibhekene nokuzingela ukuphatha kakade kulula kakhulu, nhlobo ngaphandle kokuba kube nokudinga okudingekayo. Ngokuba sandwich flat ngokuphelele, ungakwazi ukususa hhayi kuphela ama-crustaceans, kodwa futhi ngobumnene, ngaphandle kokulimaza lo isinkwa, crusts eliphezulu futhi ephansi. Bese uphinda yonke inqubo yokusika - kusuka phakathi kuya ezikhungweni. I-"rule golden" yokuqala: uma usakaza iziqephu ngamafutha, bese uwahlukanisa ngesigamu, ube izingxenye ezilinganayo, kungenzeka kuphela ngemuva kokuhlanza, uma kungenjalo i-hunk izohlakazeka kalula. Amafutha kufanele agwetshwe ukuze kube lula, okwenza kube lula futhi "adle", kahle elele isinkwa nomese.
I-Baton ingena ezincekeni ezijwayelekile - kusukela phezulu kwekhanda kuya phezulu. Khona-ke ucezu ngalunye luhlukaniswe ngesigamu: eceleni noma ngaphesheya (ukwakha uhlobo "lwenyanga eyodwa").
Ngaphandle kwama-crustaceans, usike isinkwa sibe yizingxube eziningana ezinde kakhulu (ngesimo se-pastille). Ukucola kubekwe eceleni, bese usebenzisa njengendwangu.
IZINDAWO zamasangweji nge inyama, ham, isoseji, herring, sprats, pâté. Kubo, "imihlobiso" injengeyendabuko. Entwasahlobo nehlobo livame kakhulu - isithombo, iparski, ukhukhamba, utamatisi, anyanisi oluhlaza, pepper elimnandi, ulethisi. Ebusika - kaningi kunama-anyanisi, izaqathe zokuhlobisa kanye ne-beet, izikhupha zamaqanda ezihlutshiwe.
Yazi: uma ukwakheka kwesidlo sakho esikukhulelwe kuhlanganisa imayonnaise noma ukhilimu omuncu, akufanele udle ibhotela.
Ngefomu eliqediwe, isangweji ngalinye kufanele njalo ligcine ukunambitheka kwalo, ngokuya ngesakhi esiyinhloko - i-pasta, i-ham, isobho, amaqanda, ushizi, u-sprat. Futhi kudingeka siqinisekise ukuthi izingxenye zihlangene kahle, hhayi ukuphazamisa, kodwa kugcizelela ukunambitheka okuvelele komkhiqizo wokubeka ithoni.
Vumelanani, hhayi igalelo lokugcina kanye negama eliqanjwe ngamabomu, okwenza kube nesithakazelo esikhuleni. Futhi hhayi kuphela ezinganeni, kodwa nakubantu abadala. Lapha ungahluka ngendlela oyithandayo - kungaba isifiso sokwenza ukuphila kwakho kube mnandi ngisho nasezintweni ezincane.
Kulungile manje kusele ukunquma ukuthi hlobo luni lwamasangweji lunikeza okuthandayo - olulula, lendabuko noma oluyinkimbinkimbi.
IBHAYIBHELI LOKUSEBENZISWA KONKE IZINDABA ZOKUPHILA.
Iresiphi yama-cookies okumnandi ngokubikezela
Ungadliwa izitsha zokupheka etafuleni lakho
Ukupheka kwezitsha okumnandi zangempela
Yini edla ukupheka uKhisimusi?
Isobho sezinkukhu ezinkukhu
Ukwenza ukudla okumnandi nokudla okulula
Indlela yokuhlela kangcono ukukhulelwa
Imikhuba yakho izokutshela ukuthi ungubani embhedeni
Indlela yokuba umholi emphakathini
Amakha amafutha angcono kunawo wonke amadoda
Unyaka Omusha Inkukhu enezinsuku
I-Facelift ne-hyaluronic acid
Imikhiqizo nemithetho eyisisekelo yokudla kwamaprotheni
Ingane engasebenzi: izindlela zemfundo
Izesekeli zezefesi zonyaka ka-2009-2010
U-Andrei Grigoriev-Apollonov wabangela ukuhlaselwa ngemuva kokungcwaba kuka-Oleg Yakovlev, isithombe
Izitayela ezikhanyayo entwasahlobo-ehlobo 2014: yiba yindabuko kakhulu!
I-horoscope enembile ye-2010 - owesifazane waseTaurus
Ukuvimbela i-hypodynamia ne-hypokinesia
Ukupheka kwe-dessert esilula futhi ehlwabusayo
Ungayifaka kanjani imali emalini yakho?
IJam kusuka ku-currant ebomvu (i-Kiev)
Indlela yokugcina ukukhathazeka ebuhlotsheni bomuntu nowesifazane